Eksaody 2 - Ny Baiboly
23Maty tanatin'izany andro maro izany ilay mpanjakan'i Ejipta. Ny zanak'Israely mbola niferinaina tamin'ny fanandevozana, ka velon-taraina mafy, ka tafasondrotra hatrany amin'Andriamanitra ny fitarainany noho ny fanandevozana. 24Koa nohenoin'Andriamanitra ny fitarainany; tsaroany ny fanekeny tamin'i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba. 25Nijery ny zanak'Israely Andriamanitra ka nahafantatra azy. >